» मौन अवधि सुरु, के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुँदैन ?
मौन अवधि सुरु, के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुँदैन ?
२८ बैशाख २०७९, बुधबार ०७:१४
यता प्रेस काउन्सिल नेपालले मौन अवधिमा झन् गम्भीर बन्न आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार, सञ्चारकर्मी, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा अपिल गरेको छ । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि पत्रकारिताजगत् आचारसंहितातर्फ गम्भीर भएको नपाइएको भन्दै आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि हुने भएकाले यो अवधिमा अझ गम्भीर बन्न काउन्सिलले सुझाएको हो ।